Mpitondra kamiao nanodina entana: Karohin’ny polisy fatratra i Paul Alain sy Riri Mamy | NewsMada
Namoahan’ny polisy filazana didy fikarohana ireto olona hita amin’ny sary ireto. Mpamily kamiaobe mpitondra entana izy roa lahy ireto. Nampitondrana entana hitodi-doha aty Antananarivo izy roa lahy ireo, saingy nahodin’izy ireo teny an-dalana ny entana.
Ilay kamiaobe kosa hita teny Ankorondrano. Nanjavona niaraka tamin’ireo entana ireo izy roa lahy mpamily ireto. Tsy fantatra mazava aloha hatreto ny toerana misy azy roa lahy ireto sy ny nanaovany ireo entana tanaty kamiaobe ireo. Toy izao ny momba azy ireo : Rakotonanahary Manitriniaina Paul Alain, toerana nahitana azy farany tao Mahajanga. Sy Rakotomihamina José Riri Mamy, toerana nahitana azy farany tao Mahajanga. Iangaviana izay mahita na mahalala azy ireo mba hampandre haingana ny sampandraharahan’ny polisy ekonomika Anosy (DPE) na hiantso ny laharana 034 60 929 06 / 034 06 471 81. Ny polisim-pirenena dia manome toky fa mijanona ho tsiambaratelo ny mombamomba ny mpanome vaovao. “Ampahafantarina ny rehetra fa izay mandray na mampiantrano na manafina olon-dratsy dia raisina ho mpiray tsikombakomba aminy ka hohenjehina araka ny lalàna”, hoy ny polisy.
Voamarika tato ho ato fa betsaka ireo olona namoahan’ny polisy didy fikarohana toy izao noho ny fisolokiana avolenta sy/na fivadiham-pitokisana. Efa nisy trangan-javatra toy izao koa teny Ambohimangakely. Mpamily roa lahy naka fanafody avy any Toamasina tamina kamiaobe nitondra kaontenera, saingy nivily lalana izy ireo teny Ambohimangakely, ka nanjavona niaraka tamin’ireo fanafody marobe. Andro vitsy taty aoriana, hita teny Ambohipo ireo fanafody nentin’ireto mpamily ireto.